Burcad boob ka gaysatay goobaha ganacsiga ee Soomaalida Koonfur Afrika (sawiro) – Radio Daljir
Agoosto 30, 2018 6:00 b 0
Kooxo burcad ah oo u dhashay dalka Koonfur Afrika ayaa boob ku qaaday goobaha ganacsiga ee dadka Soomaalida ah ee Koonfur Afrika ka shaqaysta.
Boobkan ayaa yimid kadib markii nin Soomaali ah oo dukaan lahaa uu dilay wiil dhalinyaro ah oo u dhashay Koonfur Afrika oo doonayay inuu boob u gaysto ganacsigiisa.
Dukaamada la boobayo ayaa waxaa leh muwaadiniin u dhashay dalalka Itoobiya, Pakistan iyo Soomaali.
Dilalka iyo boobka lagula kaco dadka Soomaalida ah ee dala Koonfur Afrika ayaa wax maxkamad ah loo taagin dadka gaysta.
Martisoor: Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey iyo waayaha siyaasadda (dhegayso)